Dhageyso: Maamulka G/Sh/Hoose Oo Qirey In Isbaarooyinka Gobolka Ay U Yaalaan Ciidamo Ka Tirsan DFS – idalenews.com
Dhageyso: Maamulka G/Sh/Hoose Oo Qirey In Isbaarooyinka Gobolka Ay U Yaalaan Ciidamo Ka Tirsan DFS
Muqdisho(INO)– Maamulka Gobolka Shabeelada Hoose ayaa qirey isbaarooyin badan oo yaala Gobolka Shabeelada hoose Isla markaana ay u yaallaan Ciidamo ka tirsan kuwo Militiriga ee Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya.
Gudoomiye ku xigeenka Dhanka Maaliyada ee Mamaulka Shabeelada hoose ayaa faafahiyey isbaaro bilqan wadooyinka Gobolka Shabeelada hoose, gaar ahaan wadada aada dhinaca galeed ee u dhaxeysa Afgooye ilaa degmada Wanle weyn.Ee Gobolka Shabellah Hoose.
C/fataax Xaaji Cabdulle ayaa tilmaamay in isbaarooyin badan ay yaalaan Wadada oo dhibaatooyin ay ku qabaan Darawalada Gaadiidka, waxaana eedda isbaarooyinkaas uu dusha u saariyey Saraakiil ka tirsan Ciidamada Milateriga.
Sidoo kale waxa cadeeyey in marar badan ay kulamo la qaateen hor joogayaasha ay ka amar qaataan Ciidamada dadka ku dhibaateenaya isbaarooyinka, waxaana uu tilmamay in weli aan waxba laga qabanin cabashadii ay gudbiyeen.
Ugu dambeyntii, Maamulka Gobolka Shabeelada Hoose oo awood ahaan uu Xakameeyey Madaxweynaha Koonfur galbeed Soomaaliya ayaa u muuqdo in markaan uu ka dhamaaday dul qaad.
Dhageyso:Farmaajo oo lagu eedeeyay in uu yahay Shaqsi Sal fudeed Siyaasad leh
UPDATE:Al Shabaab group publicly executes an official in Southern Somalia